Home Ulo oru Europe Pedro Rodriguez Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Onye nhazi'. Ụmụ anyị Pedro Rodriguez Akụkọ na akụkọ na-adịghị mma Akụkọ ihe mere eme na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Pedro Rodreguez Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, hapụ Amalite.
Pedro Rodriguez Ụmụaka akụkọ Plus enweghị isi akụkọ eziokwu -Ndụ mbido
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma mụrụ na 28th nke July 1987 na Santa Cruz de Tenerife, Spain site na nne ya, Monserrat Ledesma Encinoso na nna, Juan Antonio Rodríguez Pedro.
Pedro bụ nanị nwa nke ndị mụrụ ya. Ọ dịghị mgbe ọ bụ ụdị nwatakịrị ahụ e bibiri emebi.
A zụrụ Pedro n'ụzọ zuru ezu ma soro ndị nne na nna nwee mmekọrịta chiri anya. Ịdị mma maka ụlọ akwụkwọ na egwuregwu bụ mmalite dị ukwuu nke ndụ maka nwata. Ọ chọtara nguzozi zuru oke n'ịgụ akwụkwọ ya ma soro ndị enyi na-egwu egwuregwu.
Pedro nwere mmalite mmalite nke football (agadi 16). Ọrụ ntorobịa ya malitere na 2003 mgbe mbụ ọ gara ụlọ akwụkwọ mmuta San Isidro ebe ọ na-egwu ruo 2004.
Na 2004, ọ dọtara uche nke FC Barcelona agụmakwụkwọ. Pedro kwusiri ikpe ahụ na ụlọ ịgba chaa chaa ma mesịa kpọọ ya ịbanye ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Catalan. Ọ nọgidere na-amụ ihe na agụmakwụkwọ ma na-egwuri egwu maka ìgwè ndị ntorobịa nke ụlọ ọrụ ruo 2005.
Afọ 2005 gara nke ọma maka ya ka a na-enye ya nkwekọrịta ọkachamara nke ọ bịanyere aka na ebe ọ bụla n'òtù egwuregwu nke atọ. N'etiti 2005-2007, Pedro Rodríguez ghọrọ otu n'ime ndị isi egwuregwu atọ.
Ihe ndị na-eto eto Spaniard ji eme ihe ngosi mere ka ọ nwee ike igwu egwu maka egwuregwu nke abụọ nke na-amalite site na 2007 ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ.
Na 2009 / 2010, Pedro ghọrọ onye mbụ na akụkọ ihe mere eme iji merie egwuregwu asọmpi isii na otu afọ, otu akụkọ Lionel Messi kwekọrọ na ya na 2011.
N'ozuzu ya, Pedro na-eme egwuregwu 321 maka egwuregwu mbụ nke ndị agha Barcelona, ​​na-atụle ihe mgbaru ọsọ 99 ma na-enye 46 enyemaka dị ịtụnanya nke karịa 50% (25) gaa Messi.
Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Pedro Rodriguez Ụmụaka akụkọ Plus enweghị isi akụkọ eziokwu -Ndụ Ezinụlọ
Nne Pedro, Monserrat Ledesma Encinoso na papa, Juan Antonio Rodríguez nwere ntakịrị ihe ọmụma gbasara ọdịmma ha na ịntanetị.
Akuko sitere na akwukwo a ma ama gosiri na ha bi n'obodo Spanish nke Santa Cruz de Tenerife bu ndi amara dika obodo nke okike.
Ha emeela ihe kachasị mma iji zụlite nwa ha nwoke n'ụzọ kachasị mma nke n'ezie, akwụ ụgwọ. Pedro na-enye ndị mụrụ ya ihe ọ bụla ha chọrọ.
Pedro Rodriguez Ụmụaka akụkọ Plus enweghị isi akụkọ eziokwu -Ndụ mmekọrịta
Ndụ Pedro na-ahụ n'anya kwesịrị ekwesị. O kwuru na Carolina Martin bụ onye na-akwụ ụgwọ ma kwuo na ọ bụ 5 afọ karịa ya. Ha zutere mgbe Pedro bụ 17. N'oge ahụ, Carolina bụ 22.
Akụkọ banyere Pedro Rodriguez
N'adịghị ka ndị enyi nwanyị ndị ọzọ na-eme egwuregwu, pedro mere ka ọ ghara ịchọta ihe maka ezigbo ihe kpatara ya. Ụmụ nnụnụ abụọ ahụ lụrụ di na nwunye n'afọ 2005 mgbe obere oge ha dị obere. N'okpuru bụ foto na-egosi njikọ ha.
Foto foto foto Pedro
Lelee foto a dị elu n'okpuru. Ha na-eji ụgbọ ala ha mara mma.
N'okpuru ebe a ka di na nwunye a nwere iko nke mmanya bara uru Bodega Iniesta bu nke ezigbo enyi enyi Pedro na onye otu ndi otu egwuregwu Barcelona, Andres Iniesta.
Ha kpebisiri ike ịnọchi afọ 8 tupu ha enwee nwa ha. Di na nwunye ahụ nwere nwa nwoke mbụ ha, bụ Bryan Rodriguez Martin na 4th April 2013.
Ezinụlọ Pedro Rodriguez
Carolina Martin nwere ịhụnanya ma na-elekọta di ya nke ọma. Pedro onwe ya bụ di na-ahụ n'anya ma na-ahụ maka ezinụlọ ya. Ọ naghị etinye aka n'ihe ọ bụla. Ndụ nke alụmdi na nwunye ya abụwo ezigbo ihe ịga nke ọma. Ọzọkwa, ha mara mma ọnụ
Pedro Rodriguez na nwunye, Carolina Martin
Mmekọrịta ha dabere na ịhụnanya, ntụkwasị obi na nghọta. Ya mere, ha echetụbeghị banyere nkewa ma ọ bụ ịgba alụkwaghịm. Ọ dị mkpa iburu n'uche na Carolina Martin kwuru na ọ bụ ezigbo Daniella Semaan, bụ nwunye nke Cesc Fabregas dị ka n'oge edere isiokwu a.
Dika ndi mmadu mara uzo di na nwunye di na nwunye nke Pedro, enwere ike ikwu otua Radamel Falcao, Nemanja Matic, n'adịghị ka, Edinson Cavani na Adriano bụ ndị e ji alụmdi na nwunye ha n'ihe banyere alụmdi na nwunye na esemokwu.
Pedro Rodriguez Ụmụaka akụkọ Plus enweghị isi akụkọ eziokwu -Zọpụtara Ụmụaka Ụmụaka si Bankruptcy
Site na nwata Pedro, San Isidro ka a zoputara na odighi ego site n'aka Pedro gaa Chelsea.
Ndị Spanish nke anọ nke Tenerife nwetara 420,000 si na onye ọkpụkpọ na-agafe na Chelsea, nchikota nke kariri okpukpu anọ ha na-emefu kwa afo (85,000).
Pedro bụ 10th Spaniard mgbe ọ bụla egwu maka Chelsea FC na English Premier League.
Pedro Rodriguez Ụmụaka akụkọ Plus enweghị isi akụkọ eziokwu -Ike na Ike
Ọ na-eji ụkwụ abụọ ya n'egwuregwu ahụ nke gosipụtara ya nke ọma n'ịkpọ egwu n'akụkụ ọ bụla nke pitch.
Ọ bụ onye magburu onwe ya n'igbu ọrụ. Ọ nwere ezigbo njide maka bọl na egwuregwu ahụ. Enye ama enen̄ede ọsọn̄ọ ada ye usụn̄ emi akanamde enye enen̄ede enen̄ede ama onyụn̄ enen̄ede ama enye ke ndondo ye nditịm ke ntak emi enye ọfọnde.
Nanị adịghị ike Pedro bụ nkà ya.
Ọkọlọtọ Spanish Spanish Diary